Waalidiinta kala tagay oo loo deynayo go'aanka masruufka carruurta - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Laba ruux oo lacago kala qeybsanaya. Foto: Sawirle: Jonas EkstrÃ¶mer/TT
Waalidiinta kala tagay oo loo deynayo go'aanka masruufka carruurta
Waalidiinta carruurta isku leh balse kala tagay ayaa hadda ka bacdii loo deynayaa masuuliyadda ah sida ay u kala qaadanayaan lacagta korniimada carruurta ee underhåll-ka la yiraahdo.
Waa go’aan ay horey u gaartay hey’adda Försäkringskassan oo hirgeli doona bishan oktober, kaas oo saameyn doona waalidiin kor u dhaafaya 15000 oo waalid.
Xeerkan cusub ayaa la hirgeliyey bishii april ku dhaqankiisana waxaa la meelmarinayaa laga bilaabo bishan oktober.
Ugu horeyn hey’adda Försäkringskassan waxay la xiriireysaa 2215 waalid oo ka mid ah 15 000 ee waalidiin ee lixdii bilood ee ugu dembeysey lacagta masruufka carruurta ku baxinayey waqtigii loogu talogalay.
- Damaca sharciga waa in waalidiinta arrintan iyaga loo daayo. Waxaan dooneynaa in ay iyaga ku heshiiyaan lacagta masruufka carruurta, taas oo lagu go’aaminayo baahida carruurta iyo waalidiinta dakhligooda, ayey tiri Jenny Cederborg oo madax ka ah waax ka tirsan hey’adda Försäkringskassan.
Lacagta masruufka ee la yiraahdo af-iswiidhishka Underhåll waa lacag la siiyo waalidka ay caruurrta la deganyahiin markey labada waalid kalo tagaan lagana qaado waalidka kale ee aysan carruurta la deganeyn, ujeedadan waa in aysan carruurta saboolnimo ku sugnaanin.
Sida ay sheegtay Försäkringskassan haddii waalidiinta isku af-gartaan lacagta underhåll-ka markas waxay keeneysaa in carruurta helaan masruuf ka badan bil kasta kan ay baxiso hey’adda Försäkringskassan.
Welwel laga qabo dagaal iyo ismaan-dhaaf
Si waalidka lacagta laga rabo u ogaado guud ahaan inta ay tahay waxuu adeegsan karaa hab lagu xisaabiyo oo laga heli karo bogga försäkringskassan.
Laakiin waxaa jira welwel laga qabo in arrintan ka dhex abuurto waalidiinta kalo tagay ismaan-dhaaf iyo dagaal. Ururada haweenka ee kvinnojourer ayaa go’aankan cusub ee försäkringskassan ka deyriyey.
Haddii ay shaqeyn weydo baxinta lacagta masruufka ee carruurta labada waalid ee kalotagay markas waalidka ay carruurta la degyahiin waxuu lacagta undelhåll-ka mar kale ka dalabanayaa hey’adda Försäkringskassan.
Waalidka ay dhaci karto in uu kalo kulmo lamaanahii ay kalotageen gacan ka hadal iyo hanjabaad ama dhibaato kale waa laga reebay xeerkan cusub ee hey’adda Försäkringskassan.